Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan’isa Tiorka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2013 0:38 GMT
Rehefa antontan'isa no resaka, dia mijanona manaraka am-bokony fotsiny ny foto-kevitra fony faha-Sovietika ny governemanta Tiorkmena, toy ny amin'ny boky fandrahoan-tsakafo, fanodinkodinana angon-tahiry sy fanalàna an'izay marina rehetra mety manelingelina. Misy ny lamina napetraka mandritra ny dimy taona, ary saika nihoarana foana ireo tanjona napetraka tamin'izy ireny, nefa tsy nolazaina akory ny zavatra tsy nanjary toy ny haratsin'ny zavabitan'ny ekipan'ny tanora manao kitra tamin'ny Amboaran'ny Firenena Mahaleo tena Miteny sy Mampiasa ny Teny Anglisy 2012 (CIS – Commonwealth of Independent States) na koa ny fipoahana mahafaty tany amin'ny toby fitahirizana fitaovam-piadiana tany Abadan tamin'ny Jolay 2011.
Ary raha nanjavona tao anatin'ny kisary ny olona mitondra ny otrik'aretina VIH, dia mitohy mitombo hatrany ihany kosa ny fijinjana ny varim-bazaha. Taterin’[ru] ny tranonkala tantànan'ny fanjakàna, Turkmenistan.ru, toy ny fanaon'ny mpandresy :
Nanampy [ru] sy dedaka ihany koa ny Turkmenistan.ru fa na i Alexander Lukashenko, Filohan'i Belarosia, aza dia nilaza fa nitsirirtra ny jinja vokatra Tiorkmena. Nitatitra [ru] ihany koa ny tranonkalam-baovao iray hafa tantànan'ny governemanta fa nanolotra Cadillac Escalade ny filoha Tiorkena Gurbanguly Berdymuhamedov ho an'ny mpamboly varim-bazaha any amin'ny Farintanin'i Lebap, any avaratra atsinanan'ny firenena.
Fa andeha hiverina amin'ny ‘tontolo tena izy,’ tsy taitra firy amin'ny safidin'ny governemanta amin'ny vaovao ratsy na tsara ny Tiorkmena mponina amin'ny aterineto, eo amin'ny vavahadin'ny Chrono-tm.org haino aman-jery tantanan'ny mpanohitra ny governemanta. Nandroso soso-kevitra [ru] ny olona iray fa na dia eo aza ny fijinjana ‘tsara’ lazaina fa azo isan-taona, dia tsy mitsahatra ny miakatra ny vidin'ny mofo.
Maro ny olon-kafa no manontany hoe inona ary izao no hampiasàn'ireo mpamboly an'ity Cadillac avy amin'ny mpitarika Tiorkmena ity. Nanao fanehoankevitr mahatsikaiky [ru] i Toyli, amin'ny maha mpampiasa azy:
8 ora izayZeorzia